တောင့်တင်းလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထင်းသားပေါ်အောင် ချပြလိုက်တဲ့ မတ်မတ်အေးသောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / တောင့်တင်းလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထင်းသားပေါ်အောင် ချပြလိုက်တဲ့ မတ်မတ်အေးသောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
တောင့်တင်းလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထင်းသားပေါ်အောင် ချပြလိုက်တဲ့ မတ်မတ်အေးသောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
By Shwe BaPosted on January 19, 2021 January 19, 2021
အနုပညာ လောက မှာ ဆယ်စုနှစ် လောက် က အောင်မြင်မှု တွေများ စွာ ရရှိခဲ့ပြီး ယနေ့ အချိန် အထိ ပရိသတ် တွေရဲ့ ရင်ထဲ မှာ ရပ်တည် လာနိုင် သူ က တော့ မင်း သမီးလေး အေးဝတ်ရည်သောင်းပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ မအေးသောင်းလို့လည်း ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ သူမ ဟာ ပြည့်တင်း လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ကို ပိုင် ဆိုင်ထားပြီး တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တဲ့ အလှ တရားလေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒါ့ပြင် မအေးသောင်း ဟာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်တိုက် ဆိုသလို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ တာဖြစ် ပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေရော ရုပ်ရှင် ကားကြီးတွေပါ ရိုက်ကူး နေတာပါ နော် … ။
မအေးသောင်းဟာ လက်ရှိမှာ ဆိုရင် လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးဖို့ အတွက် ပြင်ဦးလွင်ကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေ အတွက် ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား နေတာလည်း တွေ့ရပါ တယ် ။ မအေးသောင်း ဟာ ပွဲ အခမ်းအနားတွေ တက်ရောက် လာရင်လည်း မိမိုက်လွန်း နေတဲ့ သူမရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ ငေးမော နေရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် နော် … .
မကြာသေးမီ ကလည်း မအေးသောင်း ဟာ သူမ ရဲ့ Tik Tok acc လေးမှာ ပွဲအခမ်းအနား တစ်ခုကို တက်ရောက် လာရင်း ရွှေအိုရောင် ဝတ်စုံလေး ဝတ်ဆင် ကာ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လှည့်ပြပြီး အမိုက်စား ဖြစ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာ ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက် ပါတယ် နော် … .
photo credit : Aye Thaung ’ s Facebook acc
အႏုပညာ ေလာက မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ေလာက္ က ေအာင္ျမင္မႈ ေတြမ်ား စြာ ရရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္ အထိ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ရင္ထဲ မွာ ရပ္တည္ လာနိုင္ သူ က ေတာ့ မင္း သမီးေလး ေအးဝတ္ရည္ေသာင္းပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ မေအးေသာင္းလို႔လည္း ခ်စ္စနိုး ေခၚၾကတဲ့ သူမ ဟာ ျပည့္တင္း လွပတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား ကို ပိုင္ ဆိုင္ထားၿပီး တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္တဲ့ အလွ တရားေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒါ့ျပင္ မေအးေသာင္း ဟာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေန တာျဖစ္ ၿပီး ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြေရာ ႐ုပ္ရွင္ ကားႀကီးေတြပါ ရိုက္ကူး ေနတာပါ ေနာ္ … ။
မေအးေသာင္းဟာ လက္ရွိမွာ ဆိုရင္ လည္း ဇာတ္လမ္းတြဲ ရိုက္ကူးဖို႔ အတြက္ ျပင္ဦးလြင္ကို ေရာက္ရွိေနတာ ျဖစ္ၿပီး သူမရဲ့ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ဇာတ္႐ုပ္ပီျပင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစား ေနတာလည္း ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ မေအးေသာင္း ဟာ ပြဲ အခမ္းအနားေတြ တက္ေရာက္ လာရင္လည္း မိမိုက္လြန္း ေနတဲ့ သူမရဲ့ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ ေငးေမာ ေနရတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
မၾကာေသးမီ ကလည္း မေအးေသာင္း ဟာ သူမ ရဲ့ Tik Tok acc ေလးမွာ ပြဲအခမ္းအနား တစ္ခုကို တက္ေရာက္ လာရင္း ေရႊအိုေရာင္ ဝတ္စုံေလး ဝတ္ဆင္ ကာ ခႏၶာကိုယ္ေလးကို တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ လွည့္ျပၿပီး အမိုက္စား ျဖစ္ေနတဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို တင္ေပးလာ ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post ရေကူးကန်ထဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်း ကို မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
Next post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး